C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ-၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ-၂
C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ-၂
- City Jogger
Posted by City Jogger on Aug 16, 2012 in Complaint / Claim | 24 comments
နေရာ။ ။ Coffee Circle ဘေးနားမှ တွဲလျှက် Hotel။ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ရန်ကုန်မြို့ ။ တတိယထပ် ၃၀၅?????
ဖြစ်ရပ်။ ။ One for Two- shower Hose။
နဲ နဲ တော့ ကြာ ပါပြီ၊ ၃လ လောက်ကပါ။ အလုပ်နဲ့ လာ တဲ့ မိတ်ဆွေ သူ့ဘာသာ Online Booking လုပ်ပြီး တည်းတုံးက ကြုံ ခဲ့ရတာလေး ပါ။ ပြသနာ ကိုယ့်ဆီရောက်လာလို့ Reception မှာ သွားပြောတော့-“ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး၊ နေနိုင်ရင်နေ “ ဆိုလို့ ချက်ချင်း တခြားဟိုတယ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ရကြောင်းပါ။
ဒေါ်လာယူတဲ. ဟိုတယ် လုပ်နေပြီးတော့ဗျာ၊
ဓါတ်ပုံ တွေကို သာ ကြည့် ပါတော့။
Hand Spray မရှိတဲ့ ဘိုထိုင်။
ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေမယ့် C J မောင်မောင်ကိုကိုဦးဦး
About City Jogger
City Jogger has written3post in this Website..
View all posts by City Jogger →
ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့လို ့ရှိရင် အဲဒီဟိုတယ် နိုးပဲ ။
အင်းးးးးးးတန်အောင်တောင်းတဲ့ နေရာပေါ့လို ့ဘဲရွှဲ ့ပြောရမည်ထင်ပါ၏
For Your Information ပါ ။
နိုင်ငံတကာက ဟော်တယ် အားလုံး နီပါး ( အားလုံး နီပါး ) ဟာ ၊
စာရေးသူပြောတဲ့ Hand Spray မရှိကြပါ ။
အဘ Yangon က Sedona ကော Trader မှာပါတည်းဘူးပါတယ် ။
စာရေးသူပြောတဲ့ Hand Spray မရှိပါဘူး ။
တစ်ချို့ Emergency Light တွေဟာ ၊
အရေးပေါ် မီးပျက်မှ သူ့အလိုလို မီးလင်းလာအောင် ၊
Battery Source or Emergency Back up Generator နှင့်
ဆက်ထားတဲ့ စံနစ်မျိုးလဲ ရှိတတ်ပါတယ် ။
အဲဒီ မီးလုံးတွေဟာ ထွန်းလို့မရပါဘူး ။
ဘဖော ပြောတာ အမှန်ပါဘဲ ။
နိုင်ငံတစ်ကာ ဟိုတယ် အများစုမှာ မရှိပါဘူး ။
နောင်ကျရင်တော့ မြန်မာပြည်ကို အတုလိုက်ခိုးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြောင်းပါ ။
Guest Care က ဆက်ဆံရေး ညံ့တာတော့ နံမည်ထွက်တယ် ။
” နောင်ကျရင်တော့ မြန်မာပြည်ကို အတုလိုက်ခိုးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြောင်းပါ ”
အင်း ပြောရအုန်းမယ် ၊ ကထူးဆန်းရဲ့ ။
အဲဒီ Hand Spray က မြန်မာပြည် နှင့်ပဲ အဆင်ပြေတာခမျ ။
အဘ တို့ ဩဇီ က ရေပိုက်တွေကလာနေတဲ့ ၊
အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေ Pressure က အရမ်းပြင်းတယ် ခည ။
တော်ရုံ မသိနားမလည်တဲ့ ခလေးမ ၊ ဩဇီ ရေပိုက်မှာ ၊
အဲဒီ Hand Spray ဆိုတာကြီး တပ်ပြီး ဆေးမိလို့ကတော့ ၊
တစ်ခါးဒဲ အာပျိုရည် ပျက်သွားမှာ ခည ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ မတပ်ကြတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ။
လိုကယ်က ဟန်းစပရေး ပလက်ရှာ ပြင်းတဲ့ ..ရုံးတချို့ ..ကွန်ဒို တချို့ …
ရောက်ဖူးတယ်ခည …. (ဘိုင်နိမ်းနဲ့ မပြောလိုတော့..)
ရေစင်ကို တိုက် ခေါင်မိုးပေါ်မယ် အလုံပိတ် ရေကူးကန်ကြီးလို ဆောက်ထားတဲ့ စနစ်
သုံးနေသေးတဲ့ တိုက်တွေ ရှိုဒေါ့ … တိုက် ..အထပ်မြင့်ရင် မြင့်သလို ပလက်ရှာ ပြင်းပေမပေါ့ဗျာ..
အဘပြောသလိုရှို..အနှီ တိုက်တွေက ငတိမလေးဒွေ ..အော်တိုငုတ်တုတ် …
အာပျိုရည် ပျက်ပီးသားပေါ့နော်.. တေဇမ်း… နှမျောဇယာ …
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ် ရနှစ်လောက်တုန်းကတော့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်အိမ်သာထဲရောက်ဖြစ်တော့ အဲ့မှာလည်း ဟမ်းစပရေးမတပ်ထားဘူးရယ် (ခုတော့ဖြင့်မသိ)
နောက်တစ်ခု ဘယ်မှာရယ်တော့မမှတ်မိ (ရန်ကုန်တော့ရန်ကုန်ပဲ) ဟမ်းစပရေးမပါတဲ့ အိမ်သာနဲ့ကြုံဖူးတယ်
ဒါနဲ့ အရင်ရုံးမှာတုန်းက အမျိုးသမီးရေအိမ်၂လုံးရှိတာ တစ်လုံးကရေအားပြင်းပီး နောက်တစ်လုံးက အနေတော်ပဲ
” အနေတော်ပဲ ” တဲ့ ။ ဟီ ဟိ ။
ဟုတ်ပါတယ်. .. အဲ့ ရုံး ဒီကော်ရေးရှင်းလုပ်တုန်းက
အူးဂီ လက်ဆော့ ခဲ့တာပါ
အဲ့ရေအားပြင်းတာက ဂယ်တော့ ဘုရားခန်းကအခန်းကလေ
မောင်ကျောက် တို့အိမ်မှာလဲဖြစ်ဘူးတယ်။ ရေကန်တွေက ၆ထပ်တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်တင်ထားတာ။ အဲဒီနေ့က မြေညီထပ်မှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီး Pressure Control Vulve မပိတ်မိဘူး၊ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်က အိမ်မှာထမင်းလာစားတဲ့ ဆရာ့သား၊ အသံနက်ကြီးနဲ့ အလန့်တကြားအော်တာဗျာ။ ထွက်လာတော့ မျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီး “အကိုကျောက် ကျွန်တော့ ခရေပွင့်လေးတော့ လွင့်သွားပြီ” တဲ့
ဟုတ်ကဲ့…စလုံးမှာကော အင်ဒို နီး ရှား ဘာတန် မှာကော ကျမ တို့ မိသားစုတည်း ဖူးတဲ့ဟိုတယ် တွေမှာ Hand Sprayမရှိ ပါဘူး။ စူပါမားကတ် တွေ က သန့် စင်ခန်း တွေ မှာလည်း မရှိ ပါဘူး။ တစ်ရှူးတွေ အလုံအလောက် ထားပေး ပါတယ်။ ကျမ တို့ လို တောသူတွေ နဲ့ သိပ် အဆင်မပြေ လှ ပါဘူး။
တစ်လက်စတည်း ပြောလိုက်ရအုန်းမယ် ။
မြန်မာပြည်မှာလည်း အဆင့်တော့ မြင့်လာပါပြီ ။
အဘ အမှတ်မမှားဘူး ဆိုရင် ၊
Micasa Apartment Hotel ရဲ့ ၊
မြေညီထပ် ဘူဖေး Restaurant ရဲ့ ၊
Rest Room ထဲက ဘိုထိုင် အိမ်သာက ၊
အိမ်သာအိုးထဲမှာ ရေပန်းပါ ပါတယ်လေ ။
လက်နှင့်တောင် ဆေးစရာမလိုဘူး ။
ဖင်လေးကို ရှေ့နောက် ဘယ်ညာ ရွေ့ပေးနေရုံပဲ ။
နိုင်ဂျန်ဂါးက အဆင့်မြင့် ဟော်တယ်ကြီးတွေဆိုရင် ၊
ဖင်တောင် ရွေ့ပေးစရာ မလိုဘူး ။
အိမ်သာ လက်ကိုင်မှာ ရေပန်း Direction နှင့် ၊
ရေအားအတိုး အလျော့ လုပ်ပေးတဲ့ ၊
Joy Stick တောင် ပါသေး ။
ဖင်ဇိမ်ခံတယ် ဆိုတာ အဲဒါမှ အမှန် ။
ဖင်ဆေးပြီးရင် ၊ Hot Air Blower နှင့် ၊
အခြောက်ပါခံပေးတဲ့ စက်တော့ အဘ မတွေ့ဘူးသေးဘူး ။
ဟီဟိ ၊ အကြံပြုလိုက်ဦးမှပဲ ။
ဒေါ်လှ၅၀ဝဆို.. အခြောက်ပါခံပေးတဲ့.. စက်ရပါပြီအဘဖေါရေ..
မိန်းမသုံး..ယောကျာ်းသုံး.. ခလုပ်ရှိတာမို့.. မိန်းမသုံးကို ယောက်ျားသွားမသုံးမိဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်..
Intelligent Sanitary Toilet Seat Cover ,Automatic Toilet Seat+ Cover Warm water
Price: US $495.00 / piece
1.Warm water washing
Spraying water automatically after you releasing yourself,dispensing with toilet paper.
2.Special design for women washing
The special nozzle is added for women cleaning to meet the special requirement.Sanitary and convenient.
3.Constant temperature toilet seat
The temperature of toilet seat controlled by microcomputer can be changed freely in use.
4.Warm air drying
The buttock is dried by warm air which temperature can be freely selected in use,make you comfortable in relaxation.
The damping system is designed by physical buffer theroy for quietly open and close the cover and seat.
Adopt the quick coupler conner water pipe, it is more convenient for installation.
Press “energy saving” button,its program starts working and the status will be displayed on the remote control and toilet.
According to the infrared ray theory , all the functions can be controlled by the LED remote control and showed LCD screen display ,
the work status of all the functions can be clear ataglance ,convenient and visible.
Use hi-tech deodorization filtrate core,the toilet bowl can eliminate the peculiar smell and avoid the suffering bringing to users.
Grand မီးရထားမှာလဲ hand spray မရှိဘူး။စက္ကူပဲပေးထားတာ.ဘာလဲ ဘိုလိုရေးထားသေးတယ်.ရေကိုချွေတာပါဆိုတဲ့ ပုံစံမျို်းနဲ့ .k ,L ရောက်တုန်းက တော့ kL Central ဘူတာရုံက အိမ်သာ မှာလက်ကမြင်း လို့လန့်ပြီးအော်ရသေးတယ်.ဒီလိုဗျ အိမ်သာက တော့ ရု်ိးရု်ိး ဆောင့် ကြောင့်ထိုင်အိမ်သာ ဗျ.အိမ်သာတက်ရင်း ပျင်းလို့ အိမ်သာထဲမှာလေ့လာရေးပေါ့။ အဲဒီမှာ ခလုပ်လေးတစ် ခု စူးစမ်းတဲ့ အနေနဲ့ နှိပ်ကြည် ့လိုက် တာ ကိုယ် ့ဖင်တည့်တည့် ကို ရေပြွတ်နဲ့ ပက်လိုက်သလို စူးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်က လည်းဘာမသ်ိညာမသိဆိုတော့ လန့် အော်မိတာပေါ့.နောက်သေ ချာကြည့် တော့ အီးပါပြီးရင်အဲဒီခလုပ်ကိုနှိပ်ရင် ဖင် ရေဆေးဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ရေပန်း. တည့်နေတာပဲ.ချိန်ပြီး ပက် သလားတောင်မှတ်တယ်။ဟီး ပြန်တွေး ကြည့် ရင် ရှက်လိုက်တာ
ဘာ အခု မှ ကြောက်ပါပြီ ရှက်ပါပြီ လဲ။
ကိုယ့်ထိ တော့ သိပြီ မဟုတ်လား bigchef။
ဝဋ်လည်တာ ဝဋ်လည်တာ ခွိ ခွီ ခွီး။ နောက်တာ နော်။
့hand spray မပါဘဲနဲ့ တော့ မသုံးတတ်ဘူးဗျ တော်ဝင်စင်တာ က အိမ်သာတွေမှာလဲအဲလိုပဲ toilet paper ပဲပေးထားတယ်
ကျုပ်ကတော့ နိူင်ငံဂျားလည်း မရောက်
အင်တာနေရှင်နယ် ဟော်တယ်တွေက အိမ်သာတွေလဲ မတက်ဖူးတော့ ဒါတွေမသိ
ဒါပေသိ အရက်သမားလဲ ဖြစ်ပြန် လိပ်ခေါင်းလဲ ရှိတော့
ဖင်ဆေးရင် ရေပန်းတင် မဟုတ်ဘူး လက်ပါ ကူရတယ် ….
တစ်ရှူးကတော့ ကျုပ်လို ရောဂါသည် သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူး
ကျုပ်လို လိပ်ခေါင်းသမားတွေ ရှိလို့ ပျောက်ခြင်ရင် ဆရာဝန်ထက် အားကိုးစရာရှိတယ်
အိမ်တွေက ပေ ၄၀၀ဝလောက်မှာရှိပီး
တောင်ပေါ်မှာ ရေကန်တွေ တည်ထားတော့ ဦးဖောပြောတဲ့ အပျိုရေပျက်တာ လောက်တော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်
ကျုပ်တခါတည်း သွားသုံးတာ လိပ်ခေါင်းမနည်း ပြန်လိုက်ဖမ်းရပါတယ်ဆို
ချဉ်ပေါင်ဟင်းနဲ့ ငရုတ်သီးဆားထောင်း စားတုန်းကလဲ ပူတယ် စပ်တယ်
ပြန်ထုတ်တော့လဲ ပူတယ် စပ်တယ် .. အဲ … ကိစ္စပီးလို့ ရှင်းတော့ ရေနဲ့ထိလိုက်တာ ကျောကော့ပီး မျက်ရည်ပါ ဝဲခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း …. အဟင်း ပြောရင်းတောင် ကြက်သီးထတယ်..
အင်တာနေရှင်နယ်မှာ လိပ်ခေါင်း မရှိဘူးလားပေါ့
အဲဒါလေး အင်တာနေရှင်နယ် ရောက်ဖူး နေဖူးသူတွေ ပြန်ပြောပေးကျဘာ ….
ကျုပ်ကတော့ ဖင်ကို လက်နဲ့ နယ်ပီးဆေးရတာ တယ်လဲ အားရ စိတ်လဲ သန့်တယ်ဗျာ
ဧည့်သည်တွေပို့ပေးရင်း …. ထရိတ်ဒါးကို ခဏခဏရောက်ခဲ့ဖူးတယ် …. ဘယ်အခန်းမှာမှ ရေဆေးဖို ့သတ်သတ်တပ်မပေးထားဘူး …. ။ မေးကြည့်တော့ … ရေတွေဗရပွနဲ့ ကြမ်းတွေရော ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရော ညစ်ညမ်းမှာစိုးလို့ ဆိုပဲ …. အဟီး
နောက်ပြီးလေ … တချို့အခန်းတွေမှာ အိမ်သာလည်း မဟုတ်..ဘာလည်းမဟုတ် … နှစ်ခုသုံးခုလောက်စီပြီးထားတာတွေ့တယ် …. ။ ကိုယ်ကလည်း တုံးတော့ … ဘာလုပ်တာမှန်း မသိဘူး … နောက်မှမေးကြည့်တဲ့အခါ … ထိုင်နေရုံနဲ့ အော်တို ဆေးပေးပါသတဲ့တဲ့လေ …. ။ ဟီးဟီး …စူးစမ်းပြီးငုံတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့နော် …မျက်နှာတက်စင် တာဝန်မယူပါပေါ့ ….
ပြည်ပရောက်တုန်းက စဣူ ချည်းပဲသုံးခဲ့ ရလို့ပါ။
ဟိုတယ်အကြောင်းက နေပြီး အိမ်သာတွေအကြောင်း မှတ်သားရသလို။ ရေဆေးတဲ့ ပိုက်တွေအကြောင်း နောက် ဖင်တွေအကြောင်း ။အီးကုန်းမှု ပုံစံ များ
အကြောင်း…..။ နိုင်ငံတကာ အိမ်သာ များနှင့် စိတ်ဝင်စား ဗဟုသုတ ရစရာများကို ဖက်ရှုရလို့ အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
“အကိုကျောက် ကျွန်တော့ ခရေပွင့်လေးတော့ လွင့်သွားပြီ”
“ကျုပ်ကတော့ ဖင်ကို လက်နဲ့ နယ်ပီးဆေးရတာ တယ်လဲ အားရ စိတ်လဲ သန့်တယ်ဗျာ”
“လက်နှင့်တောင် ဆေးစရာမလိုဘူး ။ဖင်လေးကို ရှေ့နောက် ဘယ်ညာ ရွေ့ပေးနေရုံပဲ ။”
“ဒါနဲ့ အရင်ရုံးမှာတုန်းက အမျိုးသမီးရေအိမ်၂လုံးရှိတာ တစ်လုံးကရေအားပြင်းပီး နောက်တစ်လုံးက အနေတော်ပဲ
“ဒေါ်လှ၅၀ဝဆို.. အခြောက်ပါခံပေးတဲ့.. စက်ရပါပြီအဘဖေါရေ..
မိန်းမသုံး..ယောကျာ်းသုံး.. ခလုပ်ရှိတာမို့.. မိန်းမသုံးကို ယောက်ျားသွားမသုံးမိဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်..”
“တော်ရုံ မသိနားမလည်တဲ့ ခလေးမ ၊ ဩဇီ ရေပိုက်မှာ ၊
တစ်ခါးဒဲ အာပျိုရည် ပျက်သွားမှာ ခည ”